China Na-akpụzi cochọ Mma-IML Manufacturer na Supplier | Meste
Na-akpụzi cochọ Mma (anyị kpọrọ ya IMD) bụ teknụzụ mara mma mara mma n'ụwa. A na-ejikarị ya eme ihe na nhazi elu na ogwe ọrụ nke ngwa eletriki ezinụlọ. A na-ejikarị ya na ogwe aka na akara nke oghere windo ekwentị na shei, ogwe njikwa igwe, friji na-achịkwa pan, ntụ ntụ ntụ ntụ, dashboard ụgbọ ala, osikapa njikwa njikwa na ihe ndị ọzọ.
E kewara IMD n'ime IML (IMF bụ nke IML) na IMR, nnukwu ọdịiche dị n'etiti usoro abụọ ahụ bụ ma ngwaahịa ngwaahịa ahụ ọ nwere ihe nkiri transperent transperent.
IMD gụnyere IML, IMF, IMR
IML ： NA-EWU ỌL ((ihe obibi akwụkwọ na akụkụ plastik)
IMF ： NA-EME FILM (dika IML)
IML (N'OLDLỌ AKWOLDKWỌ AH:): Usoro atụmatụ dị ịrịba ama nke IML bụ: elu bụ ihe nkiri nke ihe nkiri doro anya siri ike, etiti bụ usoro nhazi akwụkwọ, azụ bụ akwa oyi akwa, n'ihi na ink jikọtara n'etiti, nwere ike gbochie elu ịcha ọkọ na abrasion, ma nwee ike idobe ụcha agba ka ọ ghara ịcha ogologo oge. Njirimara ndị a na-eme ngwaahịa IML n'ọtụtụ ebe.
IML usoro: PITA film ọnwụ- ụgbọelu na-ebi akwụkwọ - ink ihicha ofu - tapawa echebe film - punching oghere -Thermoforming - akpacha ajị elu udi - ihe onwunwe ịkpụzi ịkpụzi.
Uzo ato ato nke IML ngwaahịa:
1. Elu: Ihe nkiri (PET film, na-ebipụta ụkpụrụ na agba ọ bụla). Osisi, cortex, achara, akwa, osisi n imomi, akpụkpọ anụ n ,omi, akwa n imomi, igwe n ​​metalomi na ihe ndị ọzọ;
2, akwa oyi akwa: ink (Ink), gluu, wdg.
3, ala: plastic (ABS / PC / TPU / PP / PVC, wdg).
IMR (NA ỌR R AKWOLDKWỌ): Na usoro a, a na-ebipụta ụkpụrụ ahụ na ihe nkiri ahụ, a na-ejikọ ihe nkiri na oghere oghere site na ntanye ihe nkiri maka ịkpụzi ọgwụ.
Mgbe ogwu ogbugba, ink oyi akwa na ụkpụrụ na-iche site na fim, na ink oyi akwa na-ekpe na plastic akụkụ na-plastic akụkụ na ji achọ ụkpụrụ.
Enweghi ihe nchebe na-eche nche na elu ihe ikpeazu, ma emeputa ihe nkiri a. Onye na-ebu ụgbọ mmiri na usoro. Mana uru nke IMR dị na nnukwu ogo akpaaka na mmepụta yana ọnụ ala nke imepụta oke. IMR drawbacks: E biri ebi ụkpụrụ oyi akwa n'elu nke ngwaahịa, ọkpụrụkpụ nke nanị ole na ole microns, ngwaahịa ga-adị mfe iyi apụ biri ebi ụkpụrụ oyi akwa mgbe a oge, ma na-adị mfe ịjụ oyi, dapụtara na a nnọọ unsightly elu. Ke adianade do, ọhụrụ ngwaahịa mmepe okirikiri bụ ogologo, mmepe na-eri dị elu, ụkpụrụ na agba nwere ike ghara nweta obere ogbe mgbanwe mgbanwe bụkwa IMR usoro ike imeri adịghị ike Ọ dị mkpa ịkọwa na echiche: Isi ndụmọdụ nke IMR bụ ntọhapụ akwa.
IMR process: PET Film - tọhapụ gị n'ụlọnga - ink ebi akwụkwọ - Mbipụta Binder - esịtidem plastic injection - ink na plastic mgbe ahụ - mgbe mepee ebu, ihe nkiri ga-akpaghị aka hapụ si ink. E wezụga ịdị mma nke mpempe akwụkwọ e biri ebi, uzuzu nwere mmetụta dị ukwuu na mma ha, a ga-arụpụtakwa ihe ha rụpụtara na gburugburu ebe nchekwa na-adịghị ọcha.
Isi ihe dị iche n'etiti IML na IMR bụ na e nwere oghere lens dị iche iche, ya na PET ma ọ bụ PC na mpempe IML na naanị ink na IMR elu. IML eyi eguzogide, ọkọ-eguzogide ma na agba ụkpụrụ a ogologo oge. IMR dị mfe maka imepụta oke na ọnụ ala. IMR anaghị adịgide adịgide, ekwentị Nokia na Moto bụ akụkụ nke teknụzụ IMR, obere oge ga-emekwa ọkọ. nsogbu kasịnụ nke IML bụ na enweghị ike itinye ya na teknụzụ IML dum, na-ejedebe na mpaghara na-aga n'ihu.
Akụkụ nke ngwaahịa IMD / IML:
1, imepụta ngwaahịa na nghọta doro anya, adịghị ada mbà, na echiche atọ;
2, ngwaahịa nwere ogologo ọrụ ndụ, elu eyi eguzogide ma ọkọ-eguzogide, ma na-eme ọdịdị dị ọcha na ọhụrụ.
3, mbipụta ziri ezi nke + 0.05mm, nwere ike ibipụta usoro mgbagwoju anya na nke nwere ọtụtụ;
4, a ga-agbanwe ụkpụrụ na agba n'oge ọ bụla n'oge usoro mmepụta na-enweghị agbanwe agbanwe.
5. Ọdịdị nke ngwaahịa IML abụghị naanị ụgbọ elu, kamakwa ọdịdị nke elu gbagọrọ agbagọ, elu gbagọrọ agbagọ, ọdịdị ihu na mmetụta ndị ọzọ pụrụ iche.
6, ngwaahịa a enweghi ihe mgbaze nke dabere na nrapado, nke na-acho ihe ndi choro.
7. Nzipu windo di elu dika 92%.
8. Ọtọ arụmọrụ nwere edo egosipụta na ezigbo ahụ. Igodo bụ kọwaa mgbe a gbanye ha n’ime ebu. Ndụ igodo ahụ nwere ike iru ihe karịrị otu nde ugboro.
Plastic IMD ikpe
Uzo uzo na IML
IML ikpe maka ngwaọrụ nkwukọrịta
Home ngwa oru IMD igodo obubọk
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji IML n'ọtụtụ ebe, dị ka windo, shells, lenses, automotive na ngwa ụlọ na-achịkwa panel yana akụkụ ịchọ mma, nke a ga-etolite n'ime akara mgbochi adịgboroja na ụlọ ọrụ ụgbọ ala n'ọdịnihu. Ngwaahịa nwere ezigbo arụmọrụ anyanwụ, enwere ike iji ya maka ihe ịrịba ama ụgbọala, ekweghị ekwe ruo 2H ~ 3H, enwere ike iji anya m anya ekwentị, wdg, ndụ bọtịnụ nwere ike iru ihe karịrị 1 nde oge, enwere ike iji ya maka osikapa osikapa na ya na
IMD / IML nwere ike mepụta akụkụ mara mma ma yie akwa na-eguzogide ọgwụ. Mana ego dị elu karịa akụkụ izugbe. Ọ bụrụ na ngwaahịa gị chọrọ ụdị ngwaahịa a, biko kpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Plastic overmolding
Osote: Fanye ịkpụzi